Khel Paper | राजनीति
मन्त्रीसँगको भेट कि ‘चाकडी’?
काठमाण्डौ, ४ असारखड्ग प्रसाद(केपी) शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएदेखी यता युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा मात्रै तीन वटा मन्त्री फेरिइसकेका छन् । सवैभन्दा लामो समय जगत बहादुर विश्वकर्माले मन्त्रालय सम्हाले । उनी मन्त्री भएर आएपछि पनि नेपालको खेलकुद क्षेत्रका स्थायी शक्तिहरु भेटघाटका लागी उनको कार्यकक्षमा पुगेका थिए । त्यसपछि आएका खेलकुद मन्त्री दावा लामाको कार्यकक्षमा पनि एउटा
भेट्यो कि पिट्छु भन्ने मनाङगेले किन अंगालो हाले कर्मालाई ?
काठमाण्डौ, १ असारपोखरामा फुटवलकै विषयलाई लिएर कर्मा छिरिङ शेर्पाले विशेष मन पराउने मिलन गुरुङलाई केही समय पहिले राजिव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङगेले हात पात गरे । मिलनलाई हातपात गरे लगत्तै मनाङगेले कर्मा छिरिङ शेर्पा पनि फटाहा भएकाले उसलाई पनि जहाँ भेट्यो त्यही पिट्छु भनेर सार्वजनिक रुपमै भनेका थिए । त्यसपछि लामो समय कर्मा छिरिङ दिपक
काठमाण्डौ,१ असारराष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल माथी गण्डकी प्रदेश सांसद राजिव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङगेले लगाएको आरोप अति नै गम्भिर र संगिन छ । गुरुङले विगतमा गण्डकी प्रदेशमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री हुदा देखेको वेथितिपछि आफुले यस्तो आरोप लगाएको दावी गरेका छन् ।उनले लगाएको आरोप पछि राखेपका निमित्ति सदस्य सचिव पुरेन्द्र विक्रम लाखेले
खेलपेपर,काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतको आदेशको वास्ता नगर्दै झण्डै ११ बर्षदेखी नेपाली खेल क्षेत्रमा राज गर्दै आएको नेपाल ओलम्पिक कमिटि यतीबेला निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । सर्वोच्च अदालतले आज भन्दा दश बर्ष अगाडी नै वर्तमानमा जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटिको वैधानिकता नरहेको बताइसकेको थियो । एक बर्ष अगाडी मात्रै पनि फेरि सर्वोच्च अदालतको फुल
काठमाण्डौ, खेलपेपर आठौ राष्ट्रिय खेलकुद सकिए लगत्तै नेपालका खेल अधिकारी दंग देखिएका छन् । नेपालका खेल संघका पदाधिकारी पनि एउटा ठुलै सफलता लिएर काठमाण्डौ फर्किएको खुशी उनीहरुको अनुहारमा झल्किन्छ । राखेप सदस्य सचिव, मध्यपश्चिम क्षेत्रिय खेलकुद विकास समिति( विघटन भइसकेर पनि काम गरिरहेको संस्था)का पदाधिकारी पनि दंग नै छन् । तर यो प्रतियोगितामा सहभागी भएर
काठमाण्डौ, खेलपेपर नेपाल उसु संघको साधारणसभाको उदघाटन गरेर पनि बन्द सत्र र निर्वाचनलाई अवैधानिक मानेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिवले आजका दिनसम्म पनि निर्वाचित कमिटिलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरिरहेका छन् । तर नेपालगन्जमा जारी आठौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका दौरान उसुको खेल संचालन भैरहेका बेला विष्टलाई एक्कासी उसुका केही ‘हुस्सु’हरुले नेपाल उसु संघको अध्यक्ष पनि भनेर
अस्तब्यस्त तयारीका बाबजुद शुरु भयो आठौ राष्ट्रिय खेलकुद
काठमाण्डौ, खेलपेपर भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम नसकिएपनि र खेलका लागी अनुकुल मौसम नहुदा पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद आठौ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न सफल भएको छ । राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले एक समारोहका विच नेपालगंज रंगशालामा आठौ राष्ट्रिय खेलकुदको उदघाटन गरिन् । ओलम्पियन सुरेन्द्र हमाल सहितको टोलीले ओलम्पिक टर्च बालेर प्रतियोगिताको औपचारिक शुभारम्भ गरेका थिए ।
ओलम्पिक टर्च लुम्बिनीमा
आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको उदघाटनका क्रममा प्रज्वलन गरिने ओलम्पिक टर्च बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी आई पुगेको छ । प्रदेश नम्बर १ को बिराटनगर बाट चैत्र २९ गते ओलम्पिक टर्च यात्रा सुरु भएको थियो । बिराटनगरमा यस अघि राष्ट्रिय खेलकुदको सातौ सस्करण आयोजना भएको थियो । बिराटनगरबाट टर्च लिएर हिडेका चार जना ओलम्पियनहरु जीतबहादुर केसी, डम्बर कुँवर,, विकास राना
खेलपेपर, काठमाडौं। २८ फागुन २०७५ प्रदेश नं ५ मा आयोजन गर्ने भनिएको आठौँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिताको औपचारिक उद्घाटन आगामी चैत २५ गते गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको छ । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप) को कार्यकारी समितिको आज बसेको बैठकले आगामी चैत २५ गते औपचारिक उद्घाटन र ३० गते समापन गर्ने गरी मिति तोक्न राखेप बोर्डलाई सिफारिश
खेलपेपर, काठमाडौं। १६ फाल्गुन २०७५ दुईदिने औपचारिक भ्रमणका लागि चिनियाँ फुटबल सङ्घका अध्यक्ष चाइ झिन्हुआ बिहीवार नेपाल आउने भएका छन् । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)का महासचिव इन्द्रमान तुलाधरका अनुसार चाइ झिन्हुआ बिहीवार दिउँसो १ बजे काठमाडौँ आइपुग्ने कार्यक्रम छ । उहाँसँग चीन र नेपालबीच फुटबलको क्षेत्रमा हुनसक्ने सहकार्यका विषयमा छलफल हुने महासचिव तुलाधरले जानकारी